Otú E Si Egbu Ndị Omekome; Otú E Si Eji Èbè Alụ Agha n’Oge Ochie | Ị̀ Maara?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Moore Nepali Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zande Zulu
Gịnị mere e ji akụjisi ndị omekome ụkwụ ma a kpọgide ha n’osisi?
E nwere ihe Oziọma Jọn kwuru banyere Jizọs na ndị omekome abụọ a kpọgidere ha na ya n’osisi. Ọ sịrị: ‘Ndị Juu rịọrọ Paịlet ka o mee ka a kụjisie ha ụkwụ, ka e bupụkwa ozu ha.’—Jọn 19:31.
E kwuru n’iwu ndị Juu na ọ bụrụ na e gbuo onye omekome ma kwụwa ozu ya n’osisi, a gaghị ahapụ ozu ya “n’elu osisi abalị dum.” (Diuterọnọmi 21:22, 23) Ọ ga-abụkwa na ndị Juu na-eme ihe a e kwuru n’iwu ha ma ndị Rom kpọgbuo ndị Juu n’osisi. Ihe mere ndị Juu ji rịọ Paịlet ka a kụjisie Jizọs na ndị omekome abụọ ahụ ụkwụ bụ na ha chọrọ ka ha nwụọ ngwa ngwa ka e nwee ike ili ha tupu Ụbọchị Izu Ike amalite ná mgbede.
Otú ndị Rom na-esikarị akpọgbu ndị omekome bụ na ha na-eji ntu akụgide aka onye omekome na ụkwụ ya n’osisi. E bulie osisi ahụ elu, ụfụ ga na-afụ ya abụghị ihe e ji ọnụ ekwu n’ihi na ihe ji ahụ́ ya niile bụ ntu ahụ a kụgidere ya n’ụkwụ na n’aka. Ọ bụrụ na onye ahụ achọọ ikuru ume, ọ ga-agbagidesi ụkwụ ike ná ntu a kụrụ ya n’ụkwụ ka o nwee ike ibuli onwe ya elu kuru ume. Ma, ọ gaghị emeli ya ma a kụjisie ya ụkwụ. Ọ ga-anwụ n’egbughị oge maka na ọ naghịzi eku ume nke ọma ma ọ bụkwanụ ya anwụọ maka na ọbara anaghịzi agazu ya ahụ́.
Olee otú e si eji èbè alụ agha n’oge ochie?
Ọ bụ èbè ka Devid ji gbuo otu nwoke gbara ajọ dimkpa aha ya bụ Golayat. Ọ ga-abụ na Devid mụtara otú e si agba èbè n’oge ọ na-azụ atụrụ mgbe ọ bụ nwata.—1 Samuel 17:40-50.
Ihe a kpụrụ n’ahụ́ ájá nke gosiri ebe ndị Asiria ji èbè na-alụso obodo ndị juu agha
E nwere ọtụtụ ihe ndị Ijipt na ndị Asiria kpụrụ n’ahụ́ ájá n’oge Baịbụl. Èbè so na ha. Èbè bụ obere akpụkpọ anụ ma ọ bụ obere ákwà nwere oghere e kegidere eriri n’isi ya abụọ. Onye na-agba èbè na-etinye nkume kwọrọ mụrụmụrụ ma ọ bụ dị okirikiri n’etiti obere akpụkpọ anụ ahụ ma ọ bụ obere ákwà ahụ. Nkume ahụ nwere ike ịha ka obere oroma. Ọ na-efegharị èbè ahụ n’elu isi ya ma hapụ otu n’ime eriri abụọ ahụ ka nkume ahụ gbapụ. Ọ bụrụ na ọ gbapụ, ọ na-efere gaa kụọ n’ihe a chọrọ ka ọ kụọ.
A hụla ọtụtụ nkume ndị na-agba èbè ji lụọ agha n’oge ochie. A hụrụ ha n’ihe ndị na-amụ banyere ihe ndị mgbe ochie gwupụtara n’Izrel nakwa ná mba ndị gbara ya gburugburu. Ndị bụ́ aka ochie n’ịlụ agha nwere ike iji èbè ha gbapụ nkume otú ọ ga-eji oké ọsọ gaa kụọ n’ihe a chọrọ ka ọ kụọ. Ọsọ ọ ga-eji nwere ike ịkarị nke ụgbọala na-efe ọsọ. Ụfọdụ ndị ọkà mmụta ekwuola na ọ bụrụ na e jiri èbè gbapụ nkume, o nwere ike iru ebe akụ́ a gbapụrụ agbapụ ga-eru. Ma, otu ihe doro anya bụ na otú ahụ e nwere ike iji ụta gbaa mmadụ akụ́, onye ahụ anwụọ, ọ bụkwa otú ahụ ka e nwere ike iji èbè gbaa mmadụ nkume, onye ahụ anwụọ.—Ndị Ikpe 20:16.
Ị̀ Maara?—Mee 2014